Ngwa mkpanaka iji jiri Kupọns ego ego dijitalụ | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa mkpanaka 11 nke ga - enyere anyị aka ịchekwa ego
Mmanya na-egbu egbu | | android, Aplicaciones, Mobiles
Ojiji nke ekwentị mkpanaka anyị ekwesighi ilekwasị anya naanị na teknụzụ ya kachasị mma, kama ịmara etu esi eji ya dịka nkwado maka ọrụ ọ bụla anyị na-arụ kwa ụbọchị. Iji ụfọdụ ekwentị eji arụ ọrụ bara uru ma ọ bụrụ na anyị ma họrọ ndị ga - enyere anyị aka ịchekwa ego ọzọ.
Edere isiokwu a kpọmkwem na nke a, ya bụ, ịnwa ịmata nke ngwa mkpanaka nwere ike inyere anyị aka ị nweta ọnụ ọgụgụ ụfọdụ, nkwalite na ọbụnadị, ịmara otu esi ejikwa akụ na ụba anyị nke ọma.
1 Ngwa mkpanaka ịhọrọ Kupọns ego ego dijitalụ
1.1 1, dere Sherpa
1.2 2. Coupons App
1.4 4. talọ oriri na ọtaụ.comụ.com
1.5 5. Lelee51
1.6 6. Igwe mgbanaka
1.7 7. Cartwheel site na Target
1.8 8. Ụlọ ahịaSavvy
1.9 9. Anọ
1.11 11. Nyochaa
Ngwa mkpanaka ịhọrọ Kupọns ego ego dijitalụ
Dika odi ka odi ka otutu ogugu, otutu ulo ahia intaneti nke di na ntaneti n’enye gi ohere iji ubogu nke ego dijitalụ; otu oge a ga-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ọ ga-adị mgbe niile oghere echekwara nke edebere ide koodu nke ụdị Kupọns. Anyị ga-aga na saịtị ole na ole pụrụ iche iji nwee ike ịchọ koodu nke coupon ahụ.
1, dere Sherpa
Na ụdị ngwa mkpanaka ị ga-enwe ohere iji ngwaọrụ gam akporo na iOS site na njikọ ha; ozugbo ị wụnye ya na nwoke kọmputa, na-enweghị na-aha a free akaụntụ ị nwere ike ịchọgharị dị iche iche ige ka họrọ nke dijitalụ dere. Ha ga-ederịta akwụkwọ n'ụlọ ahịa dị iche iche n'ịntanetị, yabụ ị nwere ike ịchekwa nke ọ bụla n'ime ha dịka "ọkacha mmasị" n'iji kpakpando dị na otu akụkụ ya. (android na iOS)
2. Coupons App
Ọ na-dakọtara na gam akporo na iOS ngwaọrụ mkpanaka, inwe ike ịchọgharị na dị iche iche na-enye chọrọ site ya Mmepụta. Ọ bụrụ n’iche na otu n’ime kupọns dijitalụ ndị a nwere mmasị n’ebe otu enyi gị nọ, ị nwere ike ịkesa ya. (android y iOS)
Dabere na ebe ị nọ, ikekwe mkpuchi nke ngwá ọrụ a nwere ike inyere gị aka nke ukwuu. Otu ihe ọkachamara na ịnyefe Azụmaahịa Nri; ị nwere ike ịchọgharị nke ọ bụla dijitalụ Kupọns ma chekwaa ụlọ ahịa kachasị amasị gị. Mgbe enwere onyinye na ha, ị ga-enweta ọkwa ozugbo ka ị nwee ike iji ego ha. (android y iOS)
4. talọ oriri na ọtaụ.comụ.com
N'adịghị ka ndị ọzọ mobile ngwa, na onye a ị ga-enwe ga-ekwe omume enweta ego ezumike sitere na $ 4 na $ 10 dị ka akwụkwọ onyinye, ihe ị nwere ike iji ma tinye mgbe ị gara iri nri n'otu ụlọ nri mpaghara ahụ bụ akụkụ nke nkwalite ha. (android na iOS)
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpali mobile ngwa na anyị hụrụ; Dabere na ya, ị ga-enwe ohere nke nata ego ufodu dika ugwo maka ihe oriri gi. Naanị ihe ị ga - eme bụ foto nnata zụrụ ma bulite ya na ngwa mkpanaka a. Mgbe ị gafere $ 20, a ga-akwụghachi gị ego ahụ na akpaghị aka. (android y iOS)
6. Igwe mgbanaka
Y’oburu na inwetara otutu ego ego nke ego, I nwere ike ichekwaa ha ka ha nyochaa ha. O nwere ike ikwupụta gị kedu ndi odi na ike na ndi emebiela. (android y iOS)
7. Cartwheel site na Target
Ọ bụrụ na ị hụla ụfọdụ amụma n'ahịa nke na-amasị gị site na isi ihe ị ga - enweta, site na iji ngwaọrụ a ị nwere ike digitize ha;: ha ga - agbakwunye na akpaghị aka, ka ị nwee ike iji ha na ịzụta n'ọdịnihu na ụfọdụ nkwalite ahọpụtara. (Gam akporo na iOS)
8. Ụlọ ahịaSavvy
Iji ngwa a ị ga-enwe ohere inyocha onyinye dị iche iche wee chọpụta onye n’ime ha kacha mma ma ọ bụ nke kacha dịrị gị mma. (android y iOS)
Na ụdị ngwa mkpanaka a ị ga-enwe ohere ịnata ego maka nri abalị na ụlọ nri dị iche iche yana maka ịzụrụ ihe na ụlọ ahịa mkpọsa. (android y iOS)
Maka ndị na-eji ụgbọ ala, nke a nwere ike ịbụ ụzọ ọzọ magburu onwe ya, ebe ngwa ọrụ ahụ ga-enyere anyị aka mara ụlọ ọrụ gas ma ọ bụ ọdụ ọrụ, ha na-enye ego ugbu a maka ego tank zuru ezu. (android y iOS)
N'ikpeazụ, na ngwa mkpanaka a ị ga-enwe ohere debe ego na akaụntụ gị; Na ya, agaghị enwe oge ịkwụ ụgwọ n'oge ọzọ, dị ka ngwa ahụ na-enye gị ohere ịnata ihe ncheta banyere ụbọchị kachasị nke ị kwesịrị ịkagbu ụgwọ, ihe a ga-ebulite ọkachasị maka ndị na-eji kaadị akwụmụgwọ. (Gam akporo na iOS)
Na ngwa ngwa ekwentị ndị a niile anyị tụrụ aro, anyị nwere ike ị nwetaworị ohere ịme bụrụ ndị ga - erite uru ole na ole ịzụrụ ihe na anyị na-eme yana iburu njikwa ego n'ụzọ ka mma n'akpa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwa mkpanaka 11 nke ga - enyere anyị aka ịchekwa ego
Amaara m ngwa ọzọ iji chekwaa ego: a na-akpọ ya Weplan ma ọ na - enye gị ohere iji ọnụego ekwentị niile na ahịa ma chọpụta nke kachasị mma maka gị. Ọ bụkwa nnukwu njikwa njikwa. Ukwuu na-atụ aro. Enwere ike ibudata ya n'efu na Google Play.
Ezigbo onyinye m hụrụ n'anya Alberto m hụrụ n'anya. Naanị m hụrụ ya na ntuziaka a tụrụ aro yana ọ nwekwara ike ijikwa oriri sms dị ka ọ na-ekwu. Ana m ekele gị ọzọ, ọ debara aha ebe a, maka ọdịmma nke anyị niile na-eji ha kwa ụbọchị.
Zaghachi Rodrigo Iván Pacheco
Esi ewepu foto site na vidiyo na iPhone
Ntụgharị uche na Onye Ikpeazụ nke Anyị ọtụtụ egwuregwu